Egwuregwu egwuregwu 25 kachasị mma maka gam akporo | Gam akporosis
Ignacio Sala | 11/07/2021 12:00 | Egwuregwu gam akporo
Maka egwuregwu ka ewere dị ka ihe dị mma, ọ ga-enwerịrị dị mfe, kensinammuo arụzi na nke ahụ anaghị amanye anyị ịgụ ogologo paragraf nke ederede, ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ egwuregwu egwuregwu, nke anyị nwere ike iwepụta maka nkeji ole na ole wee gaa na ihe ọzọ.
Na Storelọ Ahịa Play anyị nwere n'aka anyị ọtụtụ egwuregwu dị iche iche, yana ịme ihe ka ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe egwuregwu iji fechapụta ma ọ bụ ogologo ụbọchị gị gam akporo ama ma ọ bụ mbadamba, mgbe ahụ, anyị ga-egosi gị ihe kacha mma edinam egwuregwu maka gam akporo.
1 Blackmoor 2: Onye na-eme ihe nkiri
2 Onye zombie
4 Zombie onye na-eje ije 2: Zombie Shooter
5 Nwụrụ anwụ ịkpalite 2
6 Kpọọ ọrụ: Mobile
7 Isi Maymen 2: Agbapụ na Omume
8 Onyinyo Ọgụ 2
10 apiti Mmegide
11 Ọkụ Free nke Garena
12 Oghere Marshals 2 na 3
15 Mmetụta Genshin
17 Black ọzara mobile
18 Johnny ịkpalite
19 9 Egwurugwu: Legends
21 Agha 2wa XNUMX - Agha Agha
23 Ops nke oge a
24 Egbe nke ọganihu
25 Onyunyo n'Ọrụ Arena
Blackmoor 2: Onye na-eme ihe nkiri
Ọ bụrụ na egwuregwu egwuregwu na nyiwe na-amasị gị, ịkwesighi ịkwụsị ịnwa Blackmoor 2, ụdị aha ekwenye n'elu ikpo okwu iti-em-elu, ebe anyị ga-emeri ndị iro anyị dabere na ọkpọ na nkà nke ọ bụla n'ime ihe odide ahụ.
Ihe ọzọ dị mma nke aha a bụ na ọ bụ ekwenye na otutu mmadu, na-enye anyị ohere ịlụ ọgụ ruo ihe egwuregwu 4 n'ịntanetị. Blackmoor 2 dị ibudata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Developer: Anọ abụba anọ
Zombie Catcher bụ ihe emereme-njem egwuregwu nke na-ewere ọnọdụ na a ụwa nke ndị undead wakporo. Ndị nwụrụ anwụ jupụtara na mbara ala ụwa, mana ekele maka AJ na Bud, ndị ọchụnta ego abụọ na-ejikọ ọnụ, ha ga-ejide zombies niile iji mee ka ụwa nwee nchekwa ọzọ.
Egwuregwu a bụ akụkụ nke ngalaba Họrọ ndị editọ site na Storelọ Ahịa Play, yabụ anyị ga-ahụ aha dị egwu na Zombie Catcher, aha anyị nwere ike ibudata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ n'ime ngwa ahụ.
Zombie Catcher 🧟 🧟chụ nta ma gbuo ndị nwụrụ anwụ
Developer: Egwuregwu Deca
PUBG bụ nnọọ ihe kpochapụwo na egwuregwu royale, ụdị egwuregwu nke ndị egwuregwu 100 rutere n'otu agwaetiti, aghaghị ịchọ ngwá agha ma gbuo ndị iro niile. Ọ bụ ezie na aha ọhụrụ ndị ọzọ, dịka Warzone ma ọ bụ Apex, kpuchiri PC PC, na ekwentị mkpanaaka ọ ka bụ eze.
PUBG Mobile dị maka gị budata n'efu. Ihe ịzụrụ na ngwa ahụ na-enye anyị, naanị na-enye anyị akụkụ ịchọ mma na ngwa ọgụ na-enweghị mgbe niile gụnyere nka nke ndị egwuregwu ahụ.
Zombie onye na-eje ije 2: Zombie Shooter
N'azụ aha mbụ a, anyị hụrụ a shooter na nke anyị ga-egbu zombies ekpe na nri mgbe anyị na-arụ ọrụ iji nweta akụrụngwa, bulie ikike anyị ma nweta uru ga-eme ka anyị nwekwuo ike megide ọtụtụ zombies.
Ije ije Zombie 2 dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Zombie na-eje ije 2: Zombie shooter
Developer: Egwuregwu Alda
Omuma ọzọ, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka zombies bụ Dead Trigger 2, aha nke dị na ya nje na-egbu egbu agbasaala gburugburu ụwa ọ na-ebute mmụba n'etiti ụmụ mmadụ, na-ewetara mmadụ ka ọ nwụọ.
Nwụrụ Anwụ na-akpalite 2 bụ egwuregwu nke mbụ onye ono nke ahụ na-etinye anyị n'aka anyị ọtụtụ ngwa agha dị iche iche iji kwụsị ọtụtụ zombies ndị na-eyi ndụ anyị egwu. Nwụrụ Anwụ na-akpalite 2 dị ibudata kpamkpam n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
NWADRIG ANW TR ịkpalite 2 - Zombie vlanahụ Shooter
Kpọọ ọrụ: Mobile
Oku nke aha ọrụ rutere na ngwaọrụ mkpanaka afọ ole na ole gara aga, nwere aha nke, na mgbakwunye na ọnọdụ royale agha, na-enyekwa anyị kpochapụwo map nke aha a nke anyi aghaghi ihu ndi iro n’ime otu 5 megide 5.
Oku ọrụ: Mobile dị maka gị budata n'efu. Ihe ịzụrụ na ngwa ahụ na-enye anyị, naanị na-enye anyị akụkụ ịchọ mma na ngwa ọgụ na-enweghị mgbe niile gụnyere nka nke ndị egwuregwu ahụ.
Oku nke Duty®: Ekwentị - ANNIVERSARY nke abụọ
Isi Maymen 2: Agbapụ na Omume
Aha nke, maka ịkọwa mma, na-echetara anyị aha ọla Slug bụ isi Maymen 2, a frenetic na edinam-juru n'ọnụ aha ebe anyị nwere iji rụchaa ndị iro anyị na obere egbe, égbè, sinipa, shotguns, bazookas… ịzọpụta ụwa na, na mberede, protagonist hụrụ n'anya.
Isi Maymen 2 dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe egwuregwu. Ọ naghị achọ ịntanetị ịnụ ụtọ egwuregwu ahụ, yabụ ọ dị mma maka mgbe anyị na-aga njem ọ bụghị njikọ ịntanetị nwere ike ịbụ okomoko.
Isi Mayhem 2: Agbapụ na Omume
Developer: Egwuregwu Roket Jump
Onyinyo Ọgụ 2
Onyinyo Ọgụ 2 mix hà akụkụ ọrụ na kpochapụwo ọgụ. Na egwuregwu a anyị nwere ike iji kwadebe agwa anyị na a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke na-egbu egbu na ngwá agha na-adịghị ahụkebe agha nakwa dị ka ọtụtụ nke karat usoro nke anyị ga-azọpịa ndị iro anyị.
Njem site na ụwa isii dị iche iche jupụtara na ndị mmụọ ọjọọ na-eyi egwu na egwuregwu egwuregwu a na ọgụ nke ga-etinye adrenalin gị na otu puku, na anyị nwere ike budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe egwuregwu.
Developer: Nekki - Egwuregwu na Egwuregwu Egwuregwu
Agbanyeghị na ọ dịkwaghị na Storelọ Ahịa Play, anyị enweghị ike ịkwụsị ikwu banyere Fortnite, otu n'ime egwuregwu na PUBG mere ka usoro egwuregwu royale mara. Ọ bụ ezie na iwu ụlọ nwere ike ịbụ otu n'ime ihe ndị na-adịghị mma ya, ọ bụrụ na ị na-eme ntakịrị, ọ dịghị mkpa ịmepụta Taj Mahal iji chebe onwe gị megide ndị iro gị.
Fortnite dị maka gị budata n'efu site na Weebụ Epic Games. Ihe ịzụrụ nke ngwa ahụ na-enye anyị naanị akụkụ dị mma na ngwa ọgụ nke na-esonyeghị n'ikike nke ndị egwuregwu ahụ.
Na Apiti Agha anyị ga-emerịrị chebe ụlọ anyị si apiti nke umuaka ndi ara ara ma wakpo anyi. Ọ na-etinye na mkpofu anyị karịa 300 ọkwa ma na-agụnye ọtụtụ egwuregwu mode. Iji chebe onwe anyị megide mwakpo, anyị nwere ihe karịrị ụdị 3 nke ngwa ọgụ, site na egbe egbe ruo na ndị na-agba bọmbụ.
Aha a dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Ọkụ Free nke Garena
Garena Free Fire na-enyekwa anyị agha royale mode, ma n'adịghị ka PUBG na Fortnite, egwuregwu ahụ nwere oge nke 10 nkeji nke anyị ga-egbu ndị egwuregwu 49 bụ ndị soro anyị daa na agwaetiti dịpụrụ adịpụ.
Free Fire dị maka gị budata n'efu. Ihe ịzụrụ na ngwa ahụ na-enye anyị, naanị na-enye anyị akụkụ ịchọ mma na ngwa ọgụ na-enweghị mgbe niile gụnyere nka nke ndị egwuregwu ahụ.
Ọkụ Garena n'efu: ncheta afọ 4th
Developer: INI IGBO GARENA ANA M EGO
Oghere Marshals 2 na 3
Na Space Marshals anyị na-ahụ aha echiche isometric bụ nke anyị ga-emeri ndị iro anyị mgbe anyị na-arụ ọrụ ọzọ, na ebe anyị ga-egosipụta nkà ọgụ anyị, izu ike na akara ngosi.
Oghere Marshals 2 na Space Marshals 3 bụ dị n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa. Ọ bụrụ n’inwee Google Play Pass, ịnwere ike ịnụ ụtọ aha a n’efu na-enweghị mgbasa ozi ma ọ bụ nzụta.
The Rayman aha tinye anyị a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke emereme ikpo okwu platformer, ebe anyị ga-egosipụta nkà anyị na-achịkwa agwa, aha nwere ihe karịrị afọ 30 n'ahịa na nke na-enye anyị ugbu a aha 3 dị iche iche na Storelọ Ahịa Play, ọ bụ ezie na naanị Rayman Adventures dị maka nbudata n'efu.
Ihe ngosi Rayman
Na Gimvalor anyi aghaghi alụ ọgụ maka ụzọ anyị site na igwe ojii ma merie ndị iro na njem RPG. Omume izizi nke aha a dị maka n'efu yana ịnweta ndị ọzọ anyị ga-eji zụrụ ihe mepee aha ndị ọzọ.
Grimvalor bụ dị n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa. Ọ bụrụ n’inwee Google Play Pass, ịnwere ike ịnụ ụtọ aha a n’efu na-enweghị mgbasa ozi ma ọ bụ nzụta.
Otu n'ime aha ọrụ kachasị ọhụrụ iji see Play Store na afọ gara aga wee bụrụ kụrụ bụ Genshin Impact, aha nke na-akpọrọ anyị banye na ụwa mara mma nke jupụtara na njem nke dịkwa maka n'efu, ma PC na consoles.
Developer: miHoYo Nwere Oke
Ọ bụrụ na-amasị gị akụkọ sayensị na mbụ onye ono, ị kwesịrị ị nye NOVA Legacy a ohere, aha nke dabeere na NOVA saga.Na aha a, anyị na-etinye onwe anyị na akpụkpọ ụkwụ nke Kal Wardin, a vetiran soja NOVA mmiri onye a na-akpọ azụ faịlụ iji ya ọgụ agha na n'èzí nke Njikwa Ochichi.
Nova Legacy dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Ọ bụrụ na egwuregwu ndị egwuregwu na-amasị gị, ị ga-enye Black Desert Mobile ịnwale, ebe omume bụ otu n'ime ebe ndị kachasị adọrọ mmasị ya na-anwale nkà anyị nwere ụdị edemede ọ bụla, ma na ọgụ, dịka ehi na-akọ ugbo, ịchụ nta, ịkụ azụ ...
Black Desert Mobile dị maka gị budata n'efu ma gụnye ngwa nzụta.
Ọ bụrụ na egwuregwu egwuregwu na-amasị gị na mbụ, ị kwesịrị inye Johnny Triger ịnwale Egwuregwu stickman ebe ihe ahụ anaghị agwụ na ebe ebumnuche anyị bụ ịkwatu ụwa dị n'okpuru ebe mafia ka ị na-awụli elu, na-agba ọsọ, na-atụgharị, na-amị amị ma na-ebute mgbọ ekpe na aka nri.
Johnny Triger dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Johnny Trigger - Egwuregwu agbapụ
9 Egwurugwu: Legends
Asphalt franchise enweghị ike ịla na nchịkọta nke egwuregwu kacha mma. 9 Egwurugwu: Legends bụ aha ikpeazụ nke aha a maka ngwaọrụ mkpanaka, nke anyị nwere ike iji gbaa ụgbọala ndị kachasị ọsọ na ọnụ ọnụ ala n'ụwa mgbe ị na-asọ mpi megide ndị egwuregwu ndị ọzọ.
Asphalt9: Legends dị maka gị budata n'efu ma gụnye mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụgbọ ala na utu aha, anyị nwere ike ịkwụsị ịkpọ aha Carmagedọn a ma ama, aha adabara ndị niile na-ege ntị nke anyị ga-emeri ndị iro anyị mgbe anyị na-achịkwa ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee. Versiondị egwuregwu a maka gam akporo anaghị adị iche na aha nke mere ka saga kwụsị na njedebe 90s.
Agha 2wa XNUMX - Agha Agha
Enwere ike ịchọta egwuregwu egwuregwu onye izizi nwere na World War 2, egwuregwu nke, dị ka aha ya na-egosi, na-ewere ọnọdụ na Agha worldwa nke Abụọ ebe anyị nwere ọtụtụ egwuregwu egwuregwu na-eme na ọnọdụ 5 dị iche iche, gụnyere ụdị egwuregwu 6 na-enye anyị ohere ịhọrọ ụlọ akụ n'etiti Germany, United States, Japan na Russia.
Agha Worldwa nke 2 dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Agha 2wa XNUMX - Agha Agha (Egwuregwu Egwuregwu)
Developer: Egwuregwu Edkon GmbH
I nwere ike ikwu na Standoff bụ otu Counter Strike maka ekwentị mkpanaaka, egwuregwu na-enye anyị otu igwe dị iche iche nke agbapụ agba agba a na map ọhụrụ, ụdị ngwa ọgụ ọhụrụ na ụdị egwuregwu dị iche iche ebe ndị na-eyi ọha egwu na-alụ ọgụ megide ike pụrụ iche.
Standoff 2 dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Ops nke oge a
Aha ọzọ nke nwere sitere na Counter Strike bụ Modern Ops, egwuregwu ọtụtụ egwuregwu na onye mbụ ebe anyị nwere ihe karịrị ngwá agha 30 na ozuzo, egwuregwu nke 5 megide 5, na ebe naanị ọrụ anyị bụ ịkwụsị onye iro ahụ tupu ya emee.
Ops nke oge a dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
Oge Ops: Egwuregwu Egwuregwu - Online Fps War
Egbe nke ọganihu
Aha ọzọ dị ka Moderns Ops na Standoff 2 nke sitere na Counter Stri bụ Egbe nke Ọganihu, egwuregwu dị n'etiti otu nke 4 megide 4 na-alụ ọgụ na ebe naanị otu egwuregwu nwere ike ịnọgide na-eguzo, nke bụ nke na-emeri egwuregwu ahụ. N'adịghị ka Counter Strike, ihe odide ndị dị na egbe nke ọganihu nwere ikike dị iche iche anyị nwere ike iji mee ihe iji merie ndị iro anyị.
Egbe nke ọganihu dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe egwuregwu.
Egbe nke Ọganihu Online PvP Action
Onyunyo n'Ọrụ Arena
Onyinye ọgụ Arena bụ 3 player 2D ọgụ egwuregwu na ụfọdụ nnukwu animations. Ọ na-enyekwa anyị ohere nke ịnụ ụtọ ọtụtụ egwuregwu ịlụ ọgụ megide ndị ọzọ ma ọ bụ megide ọgụgụ isi nke egwuregwu ahụ.
Aha a dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe egwuregwu, ọ bụkwa otu n'ime egwuregwu Storelọ Ahịa Play Store nke dara n'okpuru ngalaba Nhọrọ Ndị Nkwupụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu egwuregwu 25 kacha mma maka gam akporo
Etu ibudata Daemon Ngwaọrụ n'efu